कोपुको कारणले मरेको भन्दै कक्षा २ मा पढ्ने बालकको सुसाइड नोट! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > कोपुको कारणले मरेको भन्दै कक्षा २ मा पढ्ने बालकको सुसाइड नोट!
admin February 23, 2019 Uncategorized 0
फाल्गुण ११, काठमाडौं ।
गत मंगलबार महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एउटा बालकले ‘आत्महत्या’ को सूचना आयो । घटना भने भंगालको थियो । एकातिर अस्पताल ल्याएपछि आएको सूचना, अर्कोतिर कक्षा २ का बालक । प्रहरी सशंकित बन्यो, ‘कतै हत्या त होइन ?’
संस्थाकी सञ्चालकद्वय बायाँबाट क्रमशः गंगा र राजन ।
त्यतिञ्जेलसम्म बच्चा चिसो भइसकेको भएपनि केही भइहाल्छ कि भनेर तुरुन्तै अस्पताल लगेको संस्थाकी सञ्चालक समिति सदस्य गंगा विकले अनलाइनखबरसँग बताइन् ।
अनलाइनखबरबाट साभार गरिएकाे
के भयो कृष्ण ओलीलाई ? ३ दिन देखि हस्पिटलमा भारत देखि आयो यस्तो सहयोग – हेर्नुहोस भिडियो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुखः मुटु र मिर्गौलामा समस्या छैन